Fampandrosoana · Jona, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Fampandrosoana · Jona, 2014
Tantara mikasika ny Fampandrosoana tamin'ny Jona, 2014
Ankizy Malagasy 44 000 No Mamoy Ny Ainy Isan-taona Noho Ny Tsy Fahampian'ny Fitsaboana. Ahoana No Hanafoanana Izany?
Afrika Mainty 23 Jona 2014
Ankizy 44 000 no mamoy ny ainy isan-taona eto Madagasikara (tarehimarika tamin'ny taona 2012). Eo amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka, vondrona roa no tena marefo eto Madagasikara: ireo ankizy latsaky ny dimy taona sy ireo vehivavy mitondra vohoka.
Tsy Lalao Sy Fanalan'Andro Fotsiny Ny Mondialy Na Olaimpika. Noravan'Ity Habaka Ity Izany
Fanatanjahantena 18 Jona 2014
Tsy voatery hampisy fiantraikany tsara ho an'ireo tanàna mampiantrano azy ireny lanonam-panatanjahantena ireny. Mangady ny tsara, ny ratsy ary ny mahasosotra amin'ny fampiatranoana ny habaka Sport Better Cities.
Taorian'ny Famonoana Ilay Tomponà Hotely, Miaro Ny Sarin'ny Fireneny Ireo Saint Lucians
Fitantanam-pitondrana 06 Jona 2014
Taorian'ny nahafatesan'ny mpanankarena iray mpandraharaha tao St. Lucia, nifanakalo resaka momba ny fiantraikan' ny namonoana azy eo amin'ny fomba fijerin'ny iraisam-pirenena ny nosiny ireo mpisera an-tserasera ary raha hitarina dia hatrany amin'ny indostrian'ny fizahantaniny.
Rwanda: Triatra Atahorana Ny Mariboninahitr'i Paul Kagame
Afrika Mainty 01 Jona 2014
[...] Niala amin'ny naha-firenena nisolelafan'ny tandrefana azy, efa miha-lasa tsy azo ifaneraserana ankehitriny i Rwanda ary mihamaro ny fanafoanana ireo fanampiana ara-tafika sy ho an'ny fampandrosoana [...]